Wasiirka Boostada & Isgaarsiinta oo xubnaha ITU ka codsaday inay taageeraan Qaraarka khuseeya Soomaaliya – Somalitop
Home Tiknolojiyada Wasiirka Boostada & Isgaarsiinta oo xubnaha ITU ka codsaday inay taageeraan Qaraarka khuseeya Soomaaliya
(Dubai, Oktobar 21, 2018) Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Md. Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa sheegay in Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay ka shaqeyneyso sidii isgaarsiinta iyo teknolojiyada loogu adeegsan lahaa horumarinta dhaqaalaha iyo maamul-wanaagga, si shacabka Soomaaliyeed ay uga faa’iideystaan fursadaha dhaqaale ee ay teknolojiyadu keeni karto.
Isagoo ka hadlayay Shirweynaha Midowga Isgaarsiinta Adduunka (ITU) ee ka soconaya magaalada Dubai, ayuu Wasiir Cashuur carrabka ku adkeeyay in horumarka Soomaaliya uu ku xirnaan doono hadba si aan u horumarino awooddeena dhinaca teknolojiyada.
Wasiirka oo adduunyada uga warbixinayay horumarka uu dalkeenu ka sameeyay dhinaca isgaarsiinta iyo teknolojiyada, wuxuu xusay inay jiraan caqabado badan oo dalalka soo koraya aysan kaligood wax ka qaban karin, loona baahan yahay in dalalka horumaray iyo kuwa soo karayaba ay ka sameeyaan iskaashi iyo wax-wadaqabsi.
Dalkeena ayaa u gudbiyay Shirweynaha ITU qaraar tirsigiisu yahay 160, kaas oo ay soo ansixiyeen fadhiyada ITU ee heer gobol qaaradda Afrika iyo Carabtaba.
“Waxaan si xushmad leh u weydiisaneynaa dalalka xubnaha ka ah ITU inay taageeraan qaraarkan Soomaaliya ka caawinaya sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaasha iyo awoodda isgaarsiinta iyo teknolojiyada,” ayuu yiri wasiirka oo intaasi raaciyay in Soomaaliya ay ka go’an tahay in ay wada-shaqeyn iyo iskaashi la yeelato dalalka dhiggeena ah.
Shirweynaha ITU waa kulan afartii sanaba mar la qabto oo lagu doorto hoggaanka ururka, isla markaana lagu go’aamiyo qorshaha afarta sano ee socota ee ururka oo ay ku jiraan go’aamada la xiriira dalalka ama arrimaha ka dhexeeya dhammaan xubnaha.